चिरायु हस्पिटलमा कोभिड–१९ को बिमारीका लागि कोरोना फिवर क्लिनिक, आईशोलेशन सहित अब्जर्ब कक्ष सञ्चालित – SunkoshiNews
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको लगानीमा संचालनमा आएको चिरायु नेशनल हस्पिटलले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को माहामारीको सम्भावित जोखिम न्युनिकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिहरुलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । नेपालमा लकडाउन (Lockdown) शुरु भएसंगसंगैCorona Clinic (Fever Clinic), १४ वेडको Isolation वार्ड तथा Observation Room संचालन गर्नुका साथै यस अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सहरुबाट राष्ट्रिय स्तरका टेलिभिजनहरु मार्फत कोभिड–१९ सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ ।, अस्पतालको तर्फबाट रवि खड्काले एक विज्ञप्ती जारि गरी उक्त कुरा जनाएका हुन । जारि विज्ञप्तीमा भनिएको छ, लकडाउन शुरु भएदेखि हालसम्म अस्पतालले शुरु गरेको Corona Clinic (Fever Clinic) मा ४२ जना बिरामी आउनु भएको छ । आकस्मिक सेवा (Emergency) बाट सेवा लिनु भएको कुल बिरामीको संख्या ३१५ रहेको छ जसमध्ये Procedure १३८, भर्ना बिरामी १७ र शल्यक्रिया २ तथा मा.प.से. ५२ रहेको छ । साथै उक्त समयावधिमा अल्ट्रासाउण्ड ३६, इको २, इन्डोस्कोपी ३, ओ.पी.डी.बिरामी ३० रहेको छ । अस्पतालले ४ जना बिरामीको कोरोना भाइरस जाँचको लागि कबmउभि पठाएकोमा ४ जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
त्यस्त वैशाख २ गतेसम्म आकस्मिक शल्यक्रिया बाहेक अन्य बिरामीहरुको लागि लकडाउन पछिको समय दिइएको छ । कोरोनाको कहरका कारण आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य मानिसहरुको चहल पहललाई कम गराउन चिकित्कसज्यूहरुले आ–आफ्नो मोबाइल फोन मार्फत परामर्श दिने कार्य समेत भईरहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले फिजिसियन तथा मनोचिकित्सक सम्बन्धी सेवा सामाजिक दुरि कायम राखि आवश्यक सुरक्षित सामाग्री दिई सेवा शुरु गरिएको छ र आगामी दिनहरुमा क्रमशः अन्य आवश्यक ओ.पी.डी. सेवाहरु शुरु गर्ने तयारीमा पनि जनाएको छ । अस्पतालले महामारीको बेला फन्ट्रलाइनमा रहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा संचारकर्मीहरुलाई समेत मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स वितरण कार्य गरेको अस्पतालका रवी खड्काले बताएका छन । मा आएको चिरायु नेशनल हस्पिटलले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को माहामारीको सम्भावित जोखिम न्युनिकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिहरुलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । नेपालमा लकडाउन (Lockdown) शुरु भएसंगसंगैCorona Clinic (Fever Clinic), १४ वेडको Isolation वार्ड तथा Observation Room संचालन गर्नुका साथै यस अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सहरुबाट राष्ट्रिय स्तरका टेलिभिजनहरु मार्फत कोभिड–१९ सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ ।, अस्पतालको तर्फबाट रवि खड्काले एक विज्ञप्ती जारि गरी उक्त कुरा जनाएका हुन ।
जारि विज्ञप्तीमा भनिएको छ, लकडाउन शुरु भएदेखि हालसम्म अस्पतालले शुरु गरेको Corona Clinic (Fever Clinic) मा ४२ जना बिरामी आउनु भएको छ । आकस्मिक सेवा (Emergency) बाट सेवा लिनु भएको कुल बिरामीको संख्या ३१५ रहेको छ जसमध्ये Procedure १३८, भर्ना बिरामी १७ र शल्यक्रिया २ तथा मा.प.से. ५२ रहेको छ । साथै उक्त समयावधिमा अल्ट्रासाउण्ड ३६, इको २, इन्डोस्कोपी ३, ओ.पी.डी.बिरामी ३० रहेको छ । अस्पतालले ४ जना बिरामीको कोरोना भाइरस जाँचको लागि कबmउभि पठाएकोमा ४ जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । त्यस्त वैशाख २ गतेसम्म आकस्मिक शल्यक्रिया बाहेक अन्य बिरामीहरुको लागि लकडाउन पछिको समय दिइएको छ । कोरोनाको कहरका कारण आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य मानिसहरुको चहल पहललाई कम गराउन चिकित्कस ज्यूहरुले आ–आफ्नो मोबाइल फोन मार्फत परामर्श दिने कार्य समेत भईरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालले फिजिसियन तथा मनोचिकित्सक सम्बन्धी सेवा सामाजिक दुरि कायम राखि आवश्यक सुरक्षित सामाग्री दिई सेवा शुरु गरिएको छ र आगामी दिनहरुमा क्रमशः अन्य आवश्यक ओ.पी.डी. सेवाहरु शुरु गर्ने तयारीमा पनि जनाएको छ । अस्पतालले महामारीको बेला फन्ट्रलाइनमा रहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा संचारकर्मीहरुलाई समेत मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स वितरण कार्य गरेको अस्पतालका रवी खड्काले बताएका छन ।